Ebe a na-ebuga naanị nri na-amalite ọrụ na Lagos
Jise, usoro mbufe naanị nri na Naịjirịa enwetala $100,000 na ego mmụọ ozi sitere n'aka ndị ọchụnta ego na Naịjirịa na Europe. Ikpo okwu ekwuputala na ngwa ọrụ nri ya dị ugbu a LIVE.
N'ihi oria ojoo nke Covid-19 na 2020, nri na ngwa nri na-arị elu n'ụwa niile. Mmepe a emeela ka ndị na-azụ ahịa na-achọ ọrụ nnyefe nri na-enweghị ihe ọ bụla na Nigeria, ya mere Jise ejiriwo ohere ahụ na-enye usoro nnyefe nri nke na-enye ọrụ nnyefe ngwa ngwa na enyi na enyi na Nigeria malite na Lagos.
N'ịbụ onye ndị otu 4 na-arụkọ ọrụ gụnyere Marvelous Gbenro dị ka CEO, Tokurah Majid dị ka VP Growth & Operations, Ibukun Olasupo dị ka VP Ndị ahịa na Jeremy Osazuwa Agbonze VP Technology, nri-naanị nnyefe ikpo okwu nwere ọrụ yiri nke Deliveroo na Europe ma ọ bụ Doordash na. US na ebumnuche ibuga nri n'ime nkeji iri abụọ na ise.
E hiwere Jise n'ihi adịghị ike na ihe ịma aka nke ndị mmekọ nnyefe na-enye ọrụ lekwasịrị anya n'ọtụtụ ebe, si otú a na-ebute nnyefe nri n'egbu oge.
Verdant Capital na-emechi $30M na ntinye ego ụgwọ
Ingressive Capital na-etinye ego na Early Stage Startup Aboki Africa
Ọdịda a na-edobe mbupu ngwa ngwa na-aga n'ihu na-eyi iguzosi ike n'ezi ihe nke ọtụtụ ụlọ nri Naijiria egwu.
Jise, ya mere, wuru ihe ngwọta n'ụdị nke a na-ekekọrịta logistics ikpo okwu na-enye ohere ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-enweghị n'enweghị nsogbu na-eme ka nri nnyefe ngwa ngwa site leveraging ụyọkọ nke onwe nnyefe ndị ọrụ ma na-ekwe ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-eto eto site a ejikọrọ n'ọma ahịa (ngwakọta ngwọta) - JISE.
Ebe a na-ebufe naanị nri na-achọ ịbụ onye na-agbanwe egwuregwu Nigeria na azụmahịa nnyefe nri site n'inye usoro dị irè nke na-eme ka nnyefe nri na inye iwu ga-ekwe omume mgbe ọ na-ejikwa ihe na-ebuga na nnyefe sitere na ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha mma nke Nigeria na ọnụ ala nye ndị na-azụ ya.
Malite ọrụ ya n'ihu ọha taa, Jise enwetala ego mmụọ ozi $100,000 sitere na ndị ọchụnta ego a ma ama gụnyere Backroom Capital (Nigeria), Winston Capital (Ireland) yana ndị na-etinye ego mmụọ ozi ole na ole gụnyere Jonny Enagwolor, Co-Founder Treepz Inc.
N'ikwu okwu na Jise ego ego, Leonard Lynch investor na Winston Capital kwuru:
"Na Winston Capital, anyị na-achọkarị ndị otu kachasị mma iji tinye ego na Jise, anyị na-ahụ ya dị ka nnukwu ohere itinye ego na nnukwu otu.
Obi dị anyị ụtọ ịnọgide na-akwado usoro mmalite mmalite na Nigeria na ntinye ego nke abụọ anyị na kọntinent ahụ.
Ndị otu Jise nke Marvelous na-edu na-ewu Just Eat ma ọ bụ Doordash nke Nigeria na anyị nwere obi ụtọ iso na njem ha. "
Gbeenro magburu onwe ya, CEO na Co-guzobere nke Jise, ebe ọ nọrọla ihe karịrị afọ 3 na-arụ ọrụ maka Techsopht, ikpo okwu na-enye ọrụ ndị metụtara weebụ na azụmahịa ndị ahịa n'ofe mba dị iche iche, emeela ka ọganihu na-eto ngwa ngwa, mmalite na-adabere na ngwọta.
Ọ gụrụ akwụkwọ na NIIT ebe ọ zutere Jeremy Osazuwa Agbonze, onye mbụ ya na-arụkọ ọrụ bụ onye mekwara okpukpu abụọ dị ka onye isi nchịkwa maka mmalite dị ka VP, Technology.
Majid Tokurah onye bụ Co-guzobere na VP nke Uto na Ọrụ nwere ihe karịrị 10 afọ ahụmahụ na Logistics na Technology mpaghara, 4 n'ime ndị 10 afọ e nọrọ na WeMove n'otu ikike ọ na-ejide ugbu a.
Ibukun Olasupo bụ naanị nwanyị na-arụkọ ọrụ na otu Jise enweela ahụmahụ na ụfọdụ mmalite teknụzụ kachasị elu nke Nigeria ka ha na-ejikwa ọrụ ndị ahịa ha.
Ụfọdụ n'ime njikọ aka mbụ ya gụnyere Farmcrowdy, IrokoTV, Treepz na Konga. Ugbu a na Jise, ọ na-eje ozi dị ka Co-guzobere na VP nke ndị ahịa aka aka.
Ndị na-arụkọ ọrụ 4 a na-ekwe nkwa imeziwanye ndụ nke ndị na-agba ọsọ ya, ndị ahịa na ndị ọrụ site n'ichepụta ngwa ngwa, enweghị ntụpọ na ọnụ ala ọrụ nnyefe site na ntinye ya.
Ebe a na-ebuga naanị nri agaala ndụ site na ịbịanye aka na menus ụlọ oriri na ọṅụṅụ 40 n'elu ikpo okwu ha na mbụ n'ime Lekki Phase 1 axis nke Lagos.
Jise nwere olile anya inye ndị ahịa nọ n'akụkụ a nri n'ime nkeji iri abụọ na ise wee jiri nwayọọ nwayọọ gbasaa ihe nlereanya obodo ha na-amalite site na ndị na-agba ịnyịnya ígwè gafee Lagos na nkwadebe maka oge ezumike.
Ka Jise si arụ ọrụ
Budata ngwa nri Jise site na ụlọ ahịa egwuregwu masịrị gị, họrọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọkacha mmasị gị wee họrọ efere gị. Ngwa ahụ ga-egosi oge nnyefe echere na mkpokọta ọnụ ahịa.
Mgbe ị kwadoro nkọwa ndị a, biko nọdụ ala chere ka onye na-agba ọsọ na-enye gị nri gị. Ngwa a nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị ịtụnanya na Lagos ugbu a, ọ ga-agbakwunyekwa ihe karịrị oge.
Ị nwere ike ịdebanye aha iji sonye n'elu ikpo okwu dị ka onye na-ere ahịa ma ọ bụrụ na ị nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-eme nri dị ịtụnanya. Gaa leta website ma ọ bụ budata ngwa mkpanaka na IOS na Google Playstore. Jise na-ebuga ebe ọ bụla gafee Lagos State
Foto egosipụtara: Jise Co-founders
Nlebanya ngwa ngwa nke ngwa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị 5
Imelite Murtala Muhammed International Airport na teknụzụ [ICT Clinic]
Farouk Manzo pụtara dị ka onye mmeri na LG OLED TV Gaming Grand Finale
Ngwa teknụzụ 5 iji kwalite azụmahịa gị
Tech Hegemony ọ na-emetụta ndị mmadụ n'otu n'otu?